Ny Anjara Asam-pitsangatsanganana An-tsarintany
Maro ny manam-pahaizana sy orinasa mampiasa fampahalalam-baovao ankehitriny. Teknolojia tena mazàna no manamboatra ny fampiroboroboana angon-drakitra tsy ara-dalàna ary mampiova azy ho toy ny format mahomby. Ny fikojakojan'ny data dia ny fandikana URL miaraka amin'ny robot ary mampiasa XPath, CSS, REGEX na fomba hafa mifanaraka amin'izany mba handraisany ny vaovao ilaina amin'ny pejy web. Noho izany dia manome fomba iray hanangonana vaovao avy amin'ny tranonkala.
Amin'izao fotoana izao dia misy vahaolana maromaro miala amin'ny vahaolana - manomboka amin'ny vahaolana feno automata izay afaka mamadika ny vohikala manontolo ho fampahalalana fototra amin'ny ad-hoc rafitra mila ny ezaka ataon'ny olombelona.
Tsy dia misy dikany ny fampiasana ny data. Ireto ny fampiasana Internet amin'ny raharaham-barotra:
1. Ny fitadiavana ny fanatrehany an-tserasera
Ny iray amin'ireo lafiny manan-danja amin'ny fandrakofana ny data dia ny fampiasana azy mba hikiraoka ny profil momba ny raharaham-barotra sy ny fanamarihana amin'ny tranokala. Ny vaovao azo dia afaka manampy amin'ny fanombanana ny vokatra vokatra, fanehoan-kevitry ny mpampiasa, ary ny fihetsika, sns. Ny fanalana ny tranokala dia afaka lisitra sy manamarina ireo profil-n'ny mpampiasa an'arivony sy ny fanamarihany izay mety ho tena ilaina ho an'ny fanadihadiana ara-barotra.
2. Ny famoahana vokatra sy data ho an'ny tranonkala fampitahana
Misy tranonkala mpizara tranonkala mikaroka sy manakona ny vidin'ny vokatra, ny famaritana sary, ary ny sary mba hahazoana data ho fampitahana na fampifandraisana. Ny angona azo avy amin'ny vidin-tsolika dia afaka manampy amin'ny fanatsarana ny vidin-javatra, izay efa voaporofo fa manatsara ny tombom-barotra amin'ny tombombarotra. Ny orinasa any amin'ny orinasa e-commerce dia afaka manararaotra ireo fitaovana maimaim-poana azo ampiasaina mba hahazoana antoka fa manome ny taha tsara indrindra izy ireo.
3. Ny fanadihadiana sy ny fandoavam-bokan'ny mpanjifa
Izany dia ataon'ny fandaharana vaovao / tranonkala mba hahatakarana ny mpihaino azy. Azo atao ny mahafantatra ny fitondran-tenan'ny mpanatrika ny angon-drakitra. Ho an'ny fantsona, ity dia afaka manampy amin'ny famoahana vaovao ho an'ny mpijery. Ny zavatra hitanao an-tserasera, ohatra, dia manome ny fomba fitondran-tena izay azon'ilay tranonkala atao mba hahafantarana izay tena tianao.
4. Ny fitantanana ny lazany an-tserasera
Androany, ny orinasa dia mandany vola an-tapitrisany amin'ny fisorohana ny fisiana lehibe eo anivon'ny aterineto, ary ny tranonkala dia manjary iray amin'ireo teknika tena ilaina indrindra ho an'ity tanjona ity. Ny angon-drakitra noforonina dia afaka mitantara bebe kokoa momba ny fomba fitantanana ny onjam-peo an-tserasera anao, satria manampy anao hahatakatra ny mpihaino izay manantena ny fiantraikany eo amin'ny sehatra izay mety hanimba ny lazanao. Amin'ny alalan'ny mpiloka azo antoka dia afaka manolotra mora foana ny mpitarika ny soso-kevitra, ny fihetseham-po amin'ny lahatsoratra, ny lohahevitra miresaka, ary ny lafiny demografika toy ny taona sy ny lahy. Azonao ampiasaina ity tombony ity ho tombontsoanao.
5. Ny fandikana ny fanitsakitsahana ny hosoka
Ny fisainana spamming , na ny fanoratana hevitra amin'ny hosoka sy ny hevitra ho diso mamaky ny mpamaky dia nanjary fiahiana lehibe ho an'ireo olona miankina amin'ny fanadihadihana an-tserasera sy ny heviny amin'ny tanjona samihafa. Ny fanasitranana tranokala dia mety hanampy amin'ny famerenana fanamarinana an-tsoratra, fanamarinana ny tena izy, ary ny fisamborana sy fanakanana ny hosoka.
Amin'izao vanim-potoana misy ny angona lehibe ary mampiroborobo ny fifaninanana dia tsy misy farany ny fampiasana angon-drakitra. Ny orinasanao dia afaka mahita farafaharatsiny faritra iray izay ahafahana mampiasa ny angona anaty tranonkala. Ny endriky ny data dia lafiny iray manan-danja amin'ny raharaham-barotry ny taompolo faha-21 Source .